Istaraatiijiyadda saaxiibtinimada - sida loo isticmaalo vfxAlert 5 | vfxAlert official blog
Istaraatiijiyadda «Trend friend» - sida loo isticmaalo vfxAlert 5
Newbie ay u malaynayaan oo ku saabsan sida loo sameeyo lacagta on doorasho binary inta badan iloobaan ganacsiga arrimuhu waa ugu tara. Aynu eegno sida loo isticmaalo vfxAlert 5 iyo istiraatiijiyadda "Trend saaxiib".
Kasta oo ku kala duwan M1-M5. Xaaladdeenna, M1 waa la isticmaalay, laakiin muddada falanqaynta ee sii kordheysa, saxnaanta calaamaddu way sii kordheysaa.
Labada ciyaaryahan kasta oo lacagta. Shuruudda ugu weyn waa go'an (2-3 dhibic) faafitaan iyo lacag la'aan qarsoon.
All fadhiyo ganacsi Forex.
Boqolkiiba doorasho premium:
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa saddex tilmaame:
• Celceliska Celceliska Dhaqdhaqaaqa (EMA) . Tilmaamayaasha isbeddelka ee aan ku go'aansano barta furitaanka ikhtiyaarka. Istaraatiijiyadda looma jeedin ganacsiga inta lagu jiro xilliyada guryaha. Waxaan ka ganacsaneynaa oo keliya haddii qiyaasta u dhexeysa ugu yaraan 15-25 dhibcood!
• Stochastic - oscillator-ku wuxuu qiimeyn doonaa isku dheelitirka hadda u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha: saadaashu waxay ka sarreysaa heerka 80 - dhammaadka kor u kaca (xad dhaaf), ka hooseeya 20 - dhammaadka hoos u dhaca (kor loo qaaday).
• MACD . Tilmaamahan wuxuu u shaqeeyaa labadaba isbeddel ahaan iyo sida qalab oscillator ah, sidaas darteed waxay noqon doontaa calaamadda ugu dambeysa ee lagu furo ikhtiyaar.
Calaamadaha Binary fursadaha:
Mar labaad, waxaan idin xusuusiyo in fursado la furay markii ugu shishaysa arrimuhu hadda la xaqiijiyay dib qiimaha.
• XULASHADA (WAC) . Qiimuhu waa ka sarreeyaa EMA, MACD-Histogram waa cagaar oo wuxuu ka sarreeyaa heerarka eber, Stochastic wuxuu ka sarreeyaa heerarka eber ama aaggag lagu wareejiyay;
• FALL (PUT) option . Xaaladaha iska soo horjeeda: qiimaha ayaa ka hooseeya EMA, MACD wuxuu ka hooseeyaa eber, iyo Stochastic waxay ka hooseysaa eber ama aag aad loo iibsaday.
Fur ganacsi shumaca xiga ka dib calaamadaha binary. Waqtiga uu dhacayo ikhtiyaariyada waa in aysan ka yarayn 5-7 daqiiqo xitaa haddii ay tahay waqti shaqeed la doorto daqiiqad, sida fiidiyowgeena.
• Xitaa waqtiga loogu talagalay daqiiqadaha, Stochastic marar dhif ah ayey tagtaa aagagga xad-dhaafka ah waxaadna seegi kartaa heshiisyo badan oo wanaagsan. Haddii qiimaha iyo Stochastic ay bilaabaan inay u dhaqaaqaan hal jiho - waad furi kartaa ikhtiyaar !
• Marba marka ka dambeysa dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa ah, waxaa sii kordheysa suurtagalnimada isbeddel xoog leh ka dib dhammaystirkiisa. Xaaladaha noocaas ah waxaa suurtagal ah in la furo ganacsiyada calaamadaha ugu horreeya ee Dib-u-Celinta Celceliska Dhaqdhaqaaqa iyo ikhtiyaarrada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ka socda vfxAlert;
• Haddii dillaalku bixiyo si loo xiro ikhtiyaarka ka hor inta aan la gaarin, waan qabannaa (xitaa haddii ay faa'iido tahay!) Marka calaamadda ka soo horjeedda ay u muuqato soo noqnoqoshada isgoyska celceliska Dhaqdhaqaaqa iyadoo isbeddel deg deg ah ama qaraabo ah ay ku socoto jihada histogaraam MACD.
• Si weyn ayaad u hagaajin kartaa natiijada isugeynta haddii aad falanqeyn ku sameyso waqtiyo badan oo isku mar ah. Tusaale ahaan, muddooyinka M5-M15 waxay ku siin karaan calaamado ganacsi oo qarsoodi ah oo isbeddel isbeddel ah, kaas oo markaa lagu xaqiijinayo heshiis ku saabsan M1.
• Intii lagu guda jiray daabacaadda wararka aasaasiga ah iyo tirakoobka, ma fureyno xulashooyin 30 daqiiqo ka hor warka iyo 30 daqiiqo ka dib daabacaadda; ganacsatada taxaddarka leh way xiri karaan heshiisyada hadda socda. Si loo xakameeyo dhacdooyinka, waxaan isticmaalnaa jadwalka dhaqaalaha ee ku jira dhammaan meheradda ganacsiga binary ee caanka ah!
Istaraatiijiyadda intraday «Trend saaxiib» waxay u taagan tahay nidaam lagu kalsoonaan karo oo ah muxaafid xagjir ah oo loogu talagalay ganacsiga suuqa xasilloon. Halbeegyada qalabka ganacsiga waa la beddeli karaa iyadoo loo eegayo isbeddelka hadda jira. Mar labaad, waxaan ku xusuusineynaa calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ee ugu faa'iido badan ay ku jiri doonaan oo keliya meelaha isbeddelka, inta lagu jiro xilliyada fidsan ee aan ka maqanahay suuqa!